ULoyiso Gola wenze uhlelo lokuqala olukhethekile lwamahlaya | Scrolla Izindaba
ULoyiso Gola wenze uhlelo lokuqala olukhethekile lwamahlaya
Usomahlaya wakuleli uLoyiso Gola ube ngusomahlaya wokuqala ukwenza umbukiso okhethekile osuka e-Afrika ku-Netflix.
Umbukiso okhethekile, osihloko sithi Loyiso Gola: Unlearning uqoshwe eKapa futhi waqala ukuboniswa ku-Netflix mhla zingama-23 kuNdasa, kanti uveza izingqinamba eziphathelene nohlanga kanye nokuzazi ngombono oyingqayizivele.
“Lo mbukiso okhethekile osihloko sithi-Unlearning, uhlola yonke imibono kanye nendlela yokuziphatha kwethu esayifunda sisebancane egcine isifundisa nangempilo,” kusho uGola.
“ENingizimu Afrika enobandlululo ngisebenzisa amava ami okuvuthwa kanye nobudoda ukwenza abantu bahleke.”
UGola, oseqokwe kuma-Emmy amahlandla amabili, ngohlelo lwakhe i-Late Nite News with Loyiso Gola, wabonakala okokuqala kuthelevishini eminyakeni eyi-19 eyedlule emdlalweni we-SABC1, i-The Phat Joe Live talk show.
Selokhu ahamba waya phesheya kwezilwandle usethuthuke kakhulu futhi wafunda okuningi okumenze abe ngusomahlaya ophumelele namuhla.
Uthe ukuba ngundabamlonyeni wokuqala wamahlaya akhethekile avela e-Afrika kufana nempumelelo futhi isfiso sakhe ukwandisa ababukeli bakhe ezindaweni ezifana no-Norway, i-Chicago noma i-Nairobi, uma lo mbukiso okhethekile uba yimpumelelo.
“Ngiyathanda ukuhambela emadolobheni amasha, kepha indlela abenza ngayo angiyikhonzile. Ukungena, ukuseshwa, kanye nokungalwazi ulimi kuyinkinga. I-Covid ingenze ngazibuza ukuthi, ngabe ngiyafuna yini ngempela ukukwenza lokhu?”
Ubuye wathi akazimisele ngokwenza izinhlelo zamahlaya ku-Zoom.
“Ngalenza uhlelo olulodwa lwamahlaya, kodwa ngayeka. Ayingisebenzeli neze.”
Umbukiso kaLoyiso Gola: i-Unlearning umbukiso okhethekile wamahlaya othatha isikhathi esingangehora osuqophe umlando futhi nakanjani kufanele ubukwe.